Hazakazaka soavaly - Noti Caballos | Soavaly Noti
ny hazakaza-tsoavaly mamindra vola be izy ireo. Indrindra rehefa iadian-kevitra ireo ny racetracks, miaraka amin'ny soavaly mandresy sy very. Ny mpankafy hazakaza-tsoavaly manaja tena dia manana filokana indraindray.
Ao amin'ity habakabaka ity Ho hitanao ny zava-drehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny hazakaza-tsoavaly, izay ahafahantsika mahafantatra kokoa ny soavaly mandresy tsirairay, ny karazana filokana, ahoana ary aiza no miloka, inona ny vola, torohevitra ary antsipiriany hafa izay raha miaraka amintsika ny vintana dia tena ilaina tokoa rehefa mametraka filokana.
Amin'ny lafiny iray tsy azontsika hadinoina fa lalao io izay ahafahan'ny fivezivezena vola be dia be mitondra olana ary tokony hitandrina isika amin'ity olana ity hisorohana ny fikorontanana samihafa.
Ny Hipódromo de La Zarzuela dia eo amin'ny sisin'ny tanànan'i Madrid. Any an-tendrombohitra no misy azy ...
Anisan'ireo mankafy mijery soavaly mihazakazaka ve ianao? Avy eo ianao dia mety ho iray amin'ireo manafitaka, mankafy ...
Ny hazakaza-tsoavaly tsara indrindra teo amin'ny tantara
Haingam-pandeha tokoa ny hazakaza-tsoavaly. Fijerena madio amin'ny lafiny rehetra, izay mampiakatra ny fihetsem-po sy miditra ...
Tsy isalasalana fa ilay soavaly dia iray amin'ireo mpiara-dia mahatoky indrindra tamin'ny olombelona nandritra ny ...